ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်တိုးတက်လာသောအပြာအရောင်ဖြစ်ပါတယ် လုံးလေးများ သောပြောင်းဖူးမုန့်ညက် .sunflower မုန့်ညက်ကဲ့သို့အစေ့ကို process နိုင်ပါတယ်, ဂျုံကောက်ရိုးမုန့်ညက်, အညှာမုန့်ညက် ,ပဲပုပ်မုန့်ညက်နှင့်,
က လုံးလေးများစက် အဓိကအားဖြင့်တိရိစ္ဆာန်အစာတောင့်ပြုလုပ်ရန်အသုံးပြုသည်, ကြက်သားအဘို့, ဘဲ, သိုး, တိရစ္ဆာန်များ, ပြီးတော့ nimal bedding အတွက်လည်းကောင်းပါတယ်, အစာတောင့်အောင်ပြုလုပ်သည့်စက်သည်နောက်ဆုံးလုံးလေးအရွယ်အစားကိုစီမံနိုင်သည်2မှမိုက်ခရိုမီတာမှ 10 မိုက်ခရိုမီတာ , အတောင့်ထုတ်လုပ်သည့်စက်သည်အပျော့စားသစ်သား sawdust များကိုအတောင့်များအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်,
အစိုဓာတ်မှာလိုအပ်သည် 6% ရန် 10%, နှင့်လုံးလေးများထုတ်လုပ်စက်များအတွက်ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ပုံစံဖြစ်ရပါမည်.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ထုတ်လုပ်မှုအထွက်နှုန်းကနေစီစဉ် 30 ကီလိုဂရမ်မှ 2000 ကီလိုဂရမ် , သင်သည်ဤစက်တို့တွင်အလွယ်တကူရွေးချယ်နိုင်သည်, ငါတို့သည်သင်တို့၏စက်ကိုကောင်းစွာအလုပ်လုပ်စေရန်သေချာစေရန်အချိန်မရွေးသင်တို့အားအပိုပစ္စည်းများထောက်ပံ့.
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာ၌မဆိုကုန်ပစ္စည်းတိုင်းအတွက်အချိန်ပေးခြင်းနှင့်အကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့အလေးအနက်ထားသည်. ဒါပေါ့, ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အရည်အသွေးတိုးတက်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအတွင်းရှိ ၀ န်ထမ်းတိုင်း၏အဓိကတာ ၀ န်ဖြစ်သည်
Straw ရာစုနှစ်များစွာမြင်းအိပ်ရာအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်. မကြာသေးမီကမှပဲ, နည်းပညာအသစ်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြီးပြည့်စုံတဲ့လို့ထင်ရတဲ့အရာတွေကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တယ်, ဒါကြောင့်ကောက်ရိုးကနေပျော့လုံးလေးများနှင့်တင်းကုပ်၌သူတို့ကိုအသုံးပြုရန်. ကောက်ရိုးတောင့်သည်မြင်းများအတွက်အကောင်းဆုံးအိပ်ယာခင်းဖြစ်ကြောင်းအချို့အချိန်အတော်ကြာလူသိများခဲ့သည်.
ပျော့အတွက်ဆီးစုပ်ယူ ကောက်ရိုးလုံးလေးများ အရမ်းကောင်းတယ်, နှင့်အမိုးနီးယားနှင့်အနံ့ထိန်းချုပ်မှုတို့ဖြစ်သည်. နေ့စဉ်သန့်စင်သောအိပ်ရာခင်းအနည်းငယ်ကိုသာလိုအပ်သောကြောင့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းသည်အလွန်နည်းပါးသည်. အချို့သောလေ့လာမှုများကဒီချဉ်းကပ်မှုကလျှော့ချကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည် ကောက်ရိုး ထက်ဝက်အသုံးပြုပုံအသုံးပြုမှု. ရလဒ်အနေဖြင့်လုပ်သားအနည်းငယ်သာလိုအပ်သည်.
ဒါဟာများသောအားဖြင့်မှန်သည် ကောက်ရိုးလုံးလေးများ အိပ်ယာအဘို့အမြင့်မားသည်… ငါတို့ရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုစတင်ချိန်မှာ လုံးလေးများ… သင်ဟာကောက်ရိုးလုံးလေးကိုအသုံးပြုသူဖြစ်လျှင်သင်ကိုယ်တိုင်ကောက်ရိုးစပါးလုံးများကိုစတင်ကောက်ယူနိုင်ပြီးထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်အတွက်သာအသုံးပြုနိုင်သည်။. ဒီနည်းနဲ့သင့်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ထဲကိုမနက်ရှိုင်းစေဘဲမင်းရဲ့မြင်းတွေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေနိုင်မှာပါ.